Umthelela Wezemvelo we-SPAM | Martech Zone
Abantu abaku Ikhasi lewebhuFX Masonto onke ngibeke ndawonye i-infographic echaza izindleko zemvelo ze-SPAM. Ngibhale ngaphambilini mayelana Ugaxekile nomkhakha we-imeyili… Futhi ngisamangele ukuthi akekho noyedwa owenze intuthuko ekulweni noGaxekile.
Uma ama-ISP afana ne-Google, Yahoo! futhi iMicrosoft ifuna ngempela ukuzisusa ku-SPAM, izonikela ngamakheli e-imeyili avikelwe lapho i-ISP (Internet Service Provider) ilawula khona indlela yokungena kune-ESP (Email Service Provider). Lokhu kuzobavumela ukuthi bavimbe noma yimuphi omunye umthombo. Kepha maye… sinamathele ohlelweni lweminyaka engama-20 olubonakala lungathuthuki noma kunini.